भारत निर्वाचन: नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वका कारण मुस्लिम समुदाय आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित - BBC News नेपाली
भारत निर्वाचन: नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वका कारण मुस्लिम समुदाय आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित
रजिनी वैद्यनाथन बीबीसी न्यूज
Image caption शौकत अलीलाई आसाम राज्यमा भिडले घेरेको थियो
पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा मुसलमानविरुद्ध घृणाका अपराधको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि कतिपयलाई हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वमा विश्वको सबभन्दा विशाल प्रजातन्त्र खतरनाक रूपमा असहिष्णु बन्दै गएको डर लागेको छ।
यो घटना अहिले भइरहेको निर्वाचनमा पहिलो चरणमा मतदान हुनभन्दा केही दिनअगाडि भएको हो।
भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसामका एक मुसलमान व्यापारी आफ्नो कामका लागि निस्कँदै गर्दा भिडको घेरामा परे। एक समूहले शौकत अलीलाई हिलोमा घुँडा टेक्न लगाएर आक्रमण गर्‍यो।
"तिमी बाङ्ग्लादेशी हो?" भिडबाट एउटाले उनको भारतीय नागरिकताप्रति प्रश्न चिह्न उठाउँदै सोध्यो।
"किन यहाँ गाईको मासु बेचेको?" अर्कोले औँला उज्याउँदै सोध्यो।
वरपरको भिड सहयोग गर्न अघि सरेन। बरु मानिसले मोबाइलमा त्यसको भिडिओ खिचे।
'मेरो सम्पूर्ण आस्थामाथिको आक्रमण'
एक महिनापश्चात् अलीलाई अझै पनि हिँडडुल गर्न कठिन छ। मैले उनलाई उनको घरमा गएर भेटेँ। बजारभन्दा अलिकति पर, वरपर हरियाली तथा धानखेत रहेको ठाउँमा उनको घर रहेछ।
जब आफूमाथि परेको आपत्‌को बेलीविस्तार लगाउन खाटमा पलेँटी मारेर बसे, ती ४८ वर्षीय पुरुषको आँखा रसाएर आयो।
मोदी सरकारले लोकतन्त्रलाई भयतन्त्र बनायोः सिद्धु
के भारतमा नरेन्द्र मोदीको जादु फेरि चल्छ?
"उनीहरूले मलाई लट्ठीले हिर्काए। मुखमा लात्तीले हाने," आफ्नो टाउको तथा करङमा लागेको चोट देखाउँदै उनले भने।
दशकौँदेखि उनका परिवारले आफ्नो सानो पसलमा गाईको मासुको परिकार बेच्ने गर्थ्यो। तर यसअघि उनीहरूले कहिल्यै समस्या भोगेका थिएनन्। भारतमा केही राज्यले गाईको मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ किनकि हिन्दूहरूले गाईलाई पवित्र मान्छन्। तर आसाममा यसको बिक्री प्रतिबन्धित छैन।
शौकत अलीलाई केवल शारीरिक चोट मात्र लागेन - उनको मर्यादा नै खण्डित भयो। भिडले ती पक्का मुसलमानलाई सुँगुरको मासु खुवाइदियो - चपाउन र निल्न समेत बाध्य बनायो।
"मलाई बाँचिरहने अब कुनै कारण छैन," रुँदै उनले भने। "यो मेरो सम्पूर्ण आस्थामाथिको आक्रमण हो।"
हामीले भेटेको दिन उनको घरमा उनको हालचाल बुझ्न स्थानीय मुसलमान समुदायका दर्जनौँ सदस्य जम्मा भएका थिए। उनको कथा सुन्दै गर्दा कतिपय रुन थाले र अब आफूहरूपनि खतरामा परेको अनुभूति गरे।
Image caption घटनापछि अलीलाई ढाडस दिन गाउँलेहरू आएका थिए
सत्र करोड २० लाख मुसलमान अल्पसङ्ख्यक जनसङ्ख्या भएको भारत कति समावेशी भन्ने जस्ता प्रश्न यो चुनावको बेला उठिरहेको छ।
गाईको मासु बिक्री गरेको वा बिक्री गरेको शङ्कामा आक्रमणमा परेकाहरूको लम्बिँदै गएको पछिल्लो सूचीमा शौकत अली परेका छन्।
मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचको सन् २०१९ फेब्रुअरीको प्रतिवेदनअनुसार भारतका १२ राज्यमा सन् २०१५ को मे र सन् २०१८ को डिसेम्बरका बीच कम्तीमा ४४ जना मानिस मारिएका छन्। तीमध्ये ३६ जना मुसलमान थिए।
सोही अवधिमा २० राज्यमा भएका एक सय घटनामा २८० जना घाइते भएका छन्।
आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी मानव अधिकार निकाय प्रमुख मिशेल ब्यासेलेटले "खासगरी मुसलमान र ऐतिहासिक रूपमै विभेदको सिकार भएका सीमान्तकृत एवम् दलितहरूविरुद्ध बढ्दो दुर्व्यवहार" बारे चिन्ता प्रकट गरेकी छन्।
भारत स्वतन्त्र भएयता नै त्यहाँ धार्मिक हिंसाका कारण सबै सम्प्रदायका मानिस पीडित हुँदै आएका छन्।
तर अहिले भारतमा सत्तामा रहेकाहरूले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अँगालेको चिन्ता छ।
भारतमा मोदीले जिते कश्मीर विवाद समाधान हुन सक्छ: इमरान खान
कश्मीरमा अस्थिरता बढ्दा बाँकी विश्व किन चिन्तित हुन्छ
त्यसको एउटा डरलाग्दो उदाहरण चाहिँ भारतमा पछिल्लो वर्षहरूमा भएकामध्येका एउटा सबभन्दा भयानक सामूहिक बलात्कारको घटनापछि के भयो भन्ने रहेको छ।
गत वर्ष जेनुअरीमा एक आठ वर्षीया मुसलमान बालिकाले परिवारको घोडालाई चराउन लगेको बेला भारत प्रशासित कश्मीरको कथुआ जिल्लामा उनको अपहरण भयो।
एक सातासम्म उनलाई एउटा हिन्दू मन्दिरमा बन्दी बनाएर राखिएको थियो। लागुपदार्थ सेवन गर्न दिएर ती बालिकालाई पटकपटक सामूहिक बलात्कार गरियो। चर्को यातनापछि उनको हत्या भयो।
घटनापश्चात् प्रहरीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उक्त बलात्कारको घटना ती बालिका सदस्य रहेको स्थानीय घुमन्ते बकरवाल समुदायलाई सो इलाकाबाट लखेट्न हिन्दू पुरुषहरूको एउटा समूहले बनाएको योजनानुरूप भएको उल्लेख छ।
एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा अहिले पनि कथुआको दुर्गम भेगमा रहेको उनको परिवारको घरको बाहिर एक प्रहरी सुरक्षामा तैनाथ छन्।
"उनीहरूले यो त मुसलमानको छोरी हो। यसलाई मारिदिए अरू डराएर यहाँबाट भाग्छन् भनेछन्," ती बालिकाका बुबाले आँखाबाट आँसु पुछ्दै मलाई बताए।
Image caption अलीलाई जबरजस्ती सुँगुरको मासु खुवाएको भिडिओ फैलिएपछि त्यसले आक्रोश उत्पन्न गराएको थियो
उनका परिवारले ती बालिका बस्ने त्यो घर छाड्न मानेनन्। तर उनीहरू आफ्नो सुरक्षाबारे चिन्तित छन्।
"हामी बाहिर जान डराउँछौँ," उनको आमाले भनिन्। "बाहिर निस्कनासाथ मानिसहरू हामीलाई जथाभावी भन्छन् र कुट्ने डर देखाउँछन्।"
ती बालिकाको हत्यापश्चात् सयौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिए।
तर कैयौँ स्थानीय विरोध प्रदर्शनहरू ती आठ हिन्दू युवाको समर्थनमा पनि भयो। राज्य सरकारमा रहेका दुईजना भाजपा मन्त्रीहरू चौधरीलाल सिंह तथा चन्दरप्रकाश गङ्गा पनि त्यस्ता प्रदर्शनमा सामेल थिए।
"एक बालिकाको मृत्यु भएकोमा यति धेरै अनुसन्धान भएको छ। जबकि यहाँ यति धेरै महिलाको मृत्यु भएका छन्," सिंहले त्यतिखेर एउटा र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै भने।
के भारतीय निर्वाचनमा प्रियंका गान्धीको ‘जादु’ चल्ला?
भारतीय चुनावमा चिनीको राजनीति
राजीव गान्धीबारे गरेको टिप्पणी फिर्ता लिन मोदीद्वारा अस्वीकार
प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त बलात्कारको निन्दा गरे तर ती मन्त्रीको तत्काल राजीनामा मागेनन्। हप्तौँको दबावपश्चात् बल्ल तिनले पद त्यागे।
विवरणहरूका अनुसार तर भाजपाका महासचिव राम माधवले तिनको प्रतिरक्षा गरिराखे।
"पार्टीले गङ्गा र सिंहलाई पदत्याग गराउन चाहेको थिएन। सञ्चारमाध्यमले लगातार तिनले बलात्कार आरोपितलाई समर्थन गरेको रूपमा चित्रण गरेपछि उनीहरूले राजीनामा गरे," उनले भने।
यो घटना अपवाद भने होइन। कैयौँ त्यस्ता घटना भएका छन् जसमा भाजपाका सदस्यहरूले धार्मिक हिंसामा सामेलहरूको खुला समर्थन गरेका छन् - पीडितको अवस्थाप्रति बेवास्ता गर्दै।
सो दलले हिन्दू राष्ट्रवाद अँगाल्छ। त्यसका केही वरिष्ठ नेताहरूले हिन्दू राज्यको वकालत गर्छन्। तर पार्टी नेताहरूले बारम्बार उनीहरू अल्पसङ्ख्यकविरोधी नभएको भन्ने गर्छन्।
Image caption भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले र्‍यालीहरूमा मुसलमानलाई 'धमिरा' को सङ्ज्ञा दिएका छन्
सन् २०१५ मा गाई मारेको आशङ्कामा ५० वर्षीय मोहम्मद अख्लकलाई कुटीकुटी हत्या गरेकोमा आरोपित पुरुषहरूको एक समूह उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको चुनावी र्‍यालीमा देखा परे।
ती विवादास्पद भाजपा नेतालाई हालसालै भारतको चुनाव आयोगले इस्लाम विरोधी टिप्पणी गरेको आरोपमा केही दिन चुनाव प्रचार नगर्न आदेश दिएको थियो। उनी बरोबर मोदीका साथमा कार्यक्रममा सहभागी भइरहन्छन्।
पछिल्लो समयमा मोदीको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य नागरिक उड्डयनमन्त्री जयन्त सिन्हाले सन् २०१७ मा एकजना मुसलमान पशु व्यापारीको हत्यामा दोषी पाइएका पुरुषहरूको समूहको मुद्दा लड्दा लागेको पैसा आफूले तिरिदिएको बीबीसीलाई बताएका थिए।
बालिकाको बलात्कार-हत्याले व्यापक आक्रोश
बलात्कारविरुद्ध भारतमा प्रतिक्रिया किन ढिलो?
कश्मीरी बालिकाको मुद्दा अदालतमा
बीबीसी हिन्दीका जुगल पुरोहितलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ती दोषीहरूलाई (जो भाजपाका सदस्य थिए) गलत रूपमा सजाय दिइएकोले आफूले सघाएको सिन्हाले बताएका थिए।
भाजपा सरकारकी प्रखर आलोचक रहँदै आएकी चर्चित लेखक तथा राजनीतिक अभियानकर्मी अरुन्धती रोयले यस्ता गतिविधिलाई व्याख्या गर्दै 'माथि' बाटै संरक्षण प्रदान गरिने हुनाले यस्ता भिजिलान्ते समूहले अपराध गर्न सकेको बताइन्।
"हामीले नेतामात्र हेर्ने होइन। यस्ता घृणा फैलाउँदा त्यसले मानिसको मनमस्तिष्कमा कस्तो असर पारेको होला। यस्तो विष सफा पार्न निकै कठिन पर्नेछ," उनले मलाई बताइन्।
तर भाजपाका प्रवक्ता नलिन कोहली उनको दलको नीतिले घृणाका अपराध बढाएको मान्दैनन्। उनले 'हुँदै नभएको तथ्य स्थापित गर्न गलत आँकडा प्रयोग गरेको' आरोप संयु्क्त राष्ट्रसङ्घ तथा मानव अधिकार प्रतिवेदनमाथि लगाए।
कोहलीले मोदी सरकारअन्तर्गत सबै आस्थाका मानिसहरूलाई कल्याण हुने र विकास हुने काम भएको बताए। सरकार सम्पूर्ण सवा अर्ब भारतीयको निम्ति रहेको र धार्मिक आधारमा उसले विभेद नगर्ने कोहलीले बताए।
तर भारत चुनावमा व्यस्त रहँदै गर्दा कतिपयले भने भाजपाले दोस्रो कार्यकाल पनि जिते यो देश बहुसङ्ख्यकको हैकम चल्ने देशमा रूपान्तरण हुने त्रास व्यक्त गरे।
सो दलको घोषणापत्रको एउटा बुँदाले भारतमा रहेका सबै अवैध बाङ्ग्लादेशी आप्रवासीलाई निकाल्दिने वाचा गरेको छ।
तर केही समुदायका सदस्यलाई भने माफी दिइने उल्लेख छ। ती समुदायमा हिन्दू, बौद्ध, सिख, इसाऐ, पारसी तथा जैन छन्, तर मुसलमान छैनन्।
आसाममा ४० लाख मानिस ‘नागरिकताविहीन’
'भारतीय' भएको प्रमाणित गर्न सङ्घर्ष
आसाममा नेपालीभाषीलाई 'अनागरिक' बनिने चिन्ता
प्रचार अभियानहरूमा भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले ती आप्रवासीहरूलाई 'धमिरा' तथा 'घुसपैठिया' भन्छन्। त्यस्तो टिप्पणीको कतिपयले विरोध गरेका छन्।
आसामको गोलपारा जिल्लामा गाउँलेहरूको एक समूह प्लास्टिकका मेचमा बसेका छन्। तीमध्ये कतिपयले आफ्ना परिवारका सदस्यको फोटो रहेको प्लेकार्ड बोकेका छन्।
गत वर्ष यो राज्यभरका मानिसहरूलाई उनीहरूको वंश प्रमाणित हुने कागजात देखाउन भनियो ताकि तिनको भारतीय नागरिकता जाँच्न सकियोस्। सन् १९७१ को मार्च २४ भन्दा अगाडि नै आसाममा बसिसकेको प्रमाण देखाउन भनिएको थियो - छिमेकी बांग्लादेश स्वतन्त्र घोषणा भएको एक दिन अगाडिको मिति हो त्यो।
चार सन्तानकी आमा उफानले एउटा कागत देखाइन्। माथि गत वर्ष निधन भइसकेका उनका पतिको फोटो छ भने तल उनका कलिला छोराहरूको फोटो छ।
उनको परिवार भारतमै जन्मिएका थिए। तर कसैको पनि नाम सरकारी 'नागरिक राष्ट्रिय रजिष्टर' मा थिएन। उनीजस्तै कैयौँ मुसलमान सहित ४० लाख बासिन्दाको नाम त्यसमा छैन।
Image caption आसाम राज्यमा कागजात लिएका एक कलिला बालक
अब आफू रहँदै आएको देश र घरबाट निकालिने हो कि भन्ने त्रास उफानमा छ।
उनकै छेउमा छन् मोहम्मद साम्सुल। उनले मलाई भने कि उनका हजुरबुबा तथा बुबा आसाममै जन्मिएका हुन् र दुवैको नाम पनि रजिस्टरमा छ। तर सबै कागजपत्र हुँदाहुँदै पनि उनको नाम भने सो रजिस्टरमा छैन।
"हामी निरन्तर त्रासमा बाँचिरहेका छौँ। मलाई डर लागेको छ कि कतै राति प्रहरी आएर हाम्रो परिवारलाई शरणार्थी शिविरमा लैजाला।"
भाजपाले उसको नीति केवल अवैध आप्रवासीतर्फ लक्षित रहेको बताएको छ। तर सो नीतिलाई कुनै पनि मुसलमानलाई निकाल्न प्रयोग गरिन्छ कि भन्ने वास्तविक त्रास रहेको छ।
भारतको शक्ति उसको विविधतामा छ। सबै धर्मको सहअस्तित्वलाई संविधानले स्वीकारेको छ। तर विद्यमान राजनीतिक वातावरणले भारतको आधारभूत धर्मनिरपेक्ष चरित्र नै बिगारिदिने कैयौँको चिन्ता छ।